‘बाहुबली’ को दोस्रो शृंखला ‘बाहुबली–२’को पोस्टर सार्वजनिक - Kantipath.com
मुम्बई । व्यावसायिक रुपमा निकै सफल मानिएको बलिउड चलचित्र ‘बाहुबली’ को दोस्रो शृंखला ‘बाहुबली–२’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘बाहुबली–२’ दर्शकहरुका लागि उत्सुकताको विषय पनि बनेको छ । कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे भन्ने विषय नै यो चलचित्रको उत्सुकताको केन्द्र हो ।
बाहुबली–२ को पोस्टरमा यो उत्सुकतालाई नै केन्द्रीत गरिएको छ । पोस्टरको एक तस्वीरमा कटप्पाको हातमा बाल्यावस्थाको बाहुबलीलाई देखाइएको छ भने अर्को तस्वीरमा कटप्पाले बाहुबलीलाई तरबार प्रहार गरेको दृष्य देखाइएको छ ।
आफैंले हुर्काएको, स्नेह गरेको र भगवानसरह आदर गरेको बाहुबलीलाई कटप्पाले आखिर किन मारे ? आम दर्शकका लागि यो नै कौतुहलताको विषय बनेको हो ।
निर्देशक एसएस रामामौलीले पोस्टरलाई सोशल मिडियामा सेयर गर्दै भनेका छन्, ‘जुन बच्चलाई उसले पालन–पोषण गर्‍यो, उसैलाई उसले मा¥यो !’
सोसल मिडियामा ‘कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्‍यो’ भन्ने प्रश्न निकै चर्चित छ ।
बाहुबली हेर्नेबित्तिकै दर्शकको मनमा उठेको यो प्रश्न आजसम्म पनि अनुत्तरित छ । चलचित्र युनिटका अनुसार यो प्रश्नको जवाफ केवल तीनजनालाई थाहा छ । अभिनेता प्रभाष, निर्देशक राजामौली र कथाकारलाई मात्र यसबारे पूर्ण जानकारी छ ।
Previous Previous post: फोहोरको थुप्रोमा पहिरो जाँदा ४८ को मृत्यु
Next Next post: सरर पिलेनमा आए (भिडियो)
रमेश बुढाथोकीको लाससँग खेल्दाको अनुभव
देश दौडाहामा प्रेमगीत २ !
“देश खोज्दै जादा” मेरो भबिष्य निर्धारन गर्ने चलचित्र हो: बाबु बोगटी
गीतकार सिवाकोटिको पहिलो सांगीतिक कोशेलि “कुशल” बजारमा।